Submitted by lailai on Fri, 03/22/2013 - 02:52
There are many good tutorials available for expand collapse panel using jQuery. But this one can not only expand collapse but also can change the image using jQuery manipulating CSS.
Step 1: jQuery Library
First you need to include jQuery Library in head tag of your html file.
expand collaspe jQuery
Read more about How To Toggle Accordion Box Using jQuery
Submitted by everlearner on Sat, 03/16/2013 - 04:12
ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်မှာ ကမ္ဘာကျော် ပုဂ္ဂိုလ်တွေ၊ ကမ္ဘာက အထူးလေးစား အတုယူကြရတဲ့ ရဟန်း ရှင် လူ တွေ အတော်များများ ထွက်ပါတယ်။
သူတို့တွေရဲ့ စိတ်ဓါတ်၊ အကျင့်စာရိတ္တ၊ အများပြည်သူ အပေါ်ထားတဲ့ စေတနာ၊ လက်တွေ့ လုပ်ရပ်တွေနဲ့ ခေါင်းဆောင်ကောင်း ပီသမှုတွေဟာ တကယ့်ကို အတုယူ လေးစား မြတ်နိုး စရာပါပဲ။
Read more about သူရဲကောင်းများ မွေးဖွားမည်
JDownloader - Free and Opensource alternative to Internet Download Manager
Submitted by everlearner on Tue, 02/05/2013 - 08:27
ကျွန်တော်တို့ ဆီမှာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် သူများဆော့ဖ်ဝဲတွေကို မသိအောင် ခိုးသုံးနေခဲ့ရတာ အတော်ကြာခဲ့ပါပြီ။ အဲဒီထဲမှာ အသုံးအများဆုံး တစ်ခုကတော့ အင်တာနက် ဒေါင်းလုတ် မန်နေဂျာ ဆော့ဖ်ဝဲပါ။ ဒီဆောင်းပါးမှာတော့ အဲဒီဆော့ဖ်ဝဲအစား အခမဲ့ရယူ အသုံးပြုနိုင်ပြီး ပိုမို အစွမ်းထက်တဲ့ ဒေါင်းလုတ် မန်နေဂျာ ဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခုနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။
Read more about JDownloader - Free and Opensource alternative to Internet Download Manager
How to create Facebook short links without any software
Submitted by everlearner on Sun, 12/23/2012 - 15:45
How to create Facebook short links without any software.?
Facebook has long and hard to remember links, but it is easy to create short links.
Here is how to getashort link for SMS, shareing to others or any other usage.
Any Facebook content has their own unique ID.
Example (Status updates)
2) Remove "everlearner/posts/" OR
Take "417713808297636" and combine with facebook.com/
3) Final link http://facebook.com/417713808297636
Read more about How to create Facebook short links without any software
Submitted by mmshare on Sun, 12/23/2012 - 09:49
December music video collection for all my friends, December Birthday Boys and Birthday Girls. HaveaSweet December to you all... :)
Read more about December Songs Collections (Burmese Version)
နိုင်ငံပိုင် စီးပွားရေး၊ အစိုးရဝန်ထမ်း နဲ့ အခွန်ထမ်း ပြည်သူ
Submitted by everlearner on Wed, 11/28/2012 - 04:27
နိုင်ငံပိုင် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းနဲ့ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေဟာ နိုင်ငံသားတွေ ထမ်းဆောင်တဲ့ အခွန်တွေကရတဲ့ ငွေတွေနဲ့ တည်ထောင်ထားတာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် အမြတ်အစွန်းရရှိဖို့ထက် ပြည်သူလူထု သက်သာ အဆင်ပြေဖို့ကို အဓိက ဦးစားပေးသင့်ပါတယ်။ နိုင်ငံတော်ကို အခွန်မှန်မှန် ပေးဆောင်နေတဲ့ အခွန်ထမ်း ပြည်သူတစ်ယောက် အနေနဲ့ နိုင်ငံပိုင် လုပ်ငန်းတစ်ခု အချိုးမပြေတာ၊ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတစ်ယောက် ပုံမလာတာကို အပြုသဘောနဲ့ ထောက်ပြခြင်းဟာ မှန်ကန်တဲ့ လုပ်ရပ်တစ်ခုပါ။
ဒါဟာ နိုင်ငံတည်ဆောက်ရေးမှာ သူတတ်နိုင်တဲ့ ဘက်က ပါဝင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ နိုင်ငံသားကောင်း တစ်ယောက်ရဲ့ မွေးရာပါ တာဝန်နဲ့ တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးကို တစ်ကယ်ချစ်တဲ့သူတိုင်း လိုက်နာကျင့်သုံးရမယ့်... စာနဲ့ ရေးမထားတဲ့ ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့ မွေးရာပါ နိုင်ငံသား အခွင့်အရေးပါပဲ...
Read more about နိုင်ငံပိုင် စီးပွားရေး၊ အစိုးရဝန်ထမ်း နဲ့ အခွန်ထမ်း ပြည်သူ
Submitted by Snow on Wed, 11/21/2012 - 11:29
ညီအကို မောင်နှမများ အားလုံး မင်္ဂလာပါရှင်။ CPanel အကြောင်း တစ်စေ့တစ်စောင်း ပထမပိုင်းမှာ CPanel ရဲ့ File Manager အကြောင်း Snow တို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ အခု ဆက်ပြီး ဒီဆောင်းပါးမှာတော့ နောက်ထပ် အသုံးဝင်တဲ့ Feature တစ်ခု ဖြစ်တဲ့ 'Addon Domains' တွေ အကြောင်း ဝေမျှသွားမှာပါ။ သိချင်တာ ဖြည့်စွက်ချင်တာတွေ ရှိနေရင်လည်း Comment box လေးထဲကနေ ဆွေးနွေး အကြံပြုကြဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်။
Read more about Adding On Domains - CPanel အကြောင်း တစ်စေ့တစ်စောင်း - ၂
Submitted by everlearner on Sat, 11/10/2012 - 12:33
တကယ်တော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကိုယ်ကျင့်သီလတွေက သာလျှင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဘဝတွေကို လုံခြုံစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သီလလုံခြုံတဲ့ လူတွေ အများကြီး စုပေါင်း၊ နေထိုင်၊ အုပ်ချုပ်တဲ့ တိုင်းပြည်ကလည်း သီလရိပ်အောက်မှာ လုံခြုံ၊ အေးချမ်း၊ ကြီးပွား၊ ချမ်းသာ၊ အောင်မြင်နေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Read more about သီလခြုံလို့ လုံတဲ့ပြည်
Submitted by Snow on Tue, 10/09/2012 - 09:41
CPanel ဆိုတာ Web Hosting account တွေကို Manage လုပ်နိင်တဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲ tool တစ်ခုဖြစ်ပြီး Linux, IIS အပါအဝင် Web hosting တိုင်းလိုလိုမှာ CPanel ကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ အခု ဆောင်းပါးမှာ အများဆုံး အသုံးပြုရတဲ့ အလွန်အသုံးဝင်တဲ့ File Manager အကြောင်းကို ပြောပြချင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ Web2FTP လို့ခေါ်တဲ့ web based ftp ဆော့ဖ်ဝဲကို အသုံးပြုပြီး ဖိုင်တွေကို Upload လုပ်နည်းကိုလည်း ဝေမျှသွားပါမယ်....
Read more about CPanel အကြောင်း တစ်စေ့တစ်စောင်း